KANDIDA NAINA ANDRIANTSITOHAINA : Nidina ifotony teny 67ha sy ny manodidina indray omaly
Nanohy ny diany tao amin’ny boriborintany voalohany indray ny kandida Naina Andriantsitohaina sy ny mpanolotsaina miaraka aminy, omaly. 29 octobre 2019
Nitety fokontany maromaro teny an-toerana izy ireo ary nanohana mavitrika izao fidinana ifotony natao izao koa ny depiote Jocelyn Andriamanalinarivo, voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany. Isan’ny toerana notsidihina ny tao 67ha (Avaratra, Atsimo, Atsinanana, Andrefana) sy Ankasina. Nandritra izany, nihaino ny feon’ireo mponina tahaka ny mahazatra azy ny kandida Naina Andriantsitohaina ary nanolotra vahaolana avy hatrany.
Toerana iray isan’ny mampitaraina ny mponina eny an-toerana ny ao amin’ny tsena “Coum 67 ha.” Ratsy dia ratsy ny fotodrafitrasa no sady efa antitra ka nangatahin’ny mponina ny hanavaozana izany indray. Mila havaozina toy izany koa, hoy izy ireo ny fotodrafitrasa momba ny rano fisotro madio, fanasan-damba, trano fidiovana sy fivoahana. Amin’ny maha faritra iva iny toerana iny koa dia nangataka ireo mponina mba hanatsarana ny famoahan-drano eny an-toerana. Dibo-drano tanteraka mantsy io faritra io rehefa fahavaratra.
Namaly izany ny kandida Naina Andriantsitohaina ary nambarany fa hojerena akaiky avokoa ny mahakasika izany. Nampanantena koa ity Kandida ity fa hotsinjovina manokana ny tanora ary hovaliana ny hetahetan’izy ireo ka hisy fanomanana fifaninanana lalao ara-panatanjahantena hatao any an-toerana tsy ho ela.